समाजमा एक नयाँ अध्यायको शुरुवात - सारा खबर
एक सन्तान र जन्म दिने बाबु आमा बीच भएको लिखित सहमति त्यो नी प्रहरी रोहबरमा मा, सायद नेपालमा नै पहिलो पटक होला ।
क) जी–बबको इच्छाअनुसार समर्पण समाज नेपाल, कपनस्थित सुधार गृहमा अन्य व्यक्तिसरह राख्नुपर्नेछ ।
ख) केही समयको लागि जी–बबले चाहेको समयमा आमा–बुवालाई भेट गराउने व्यवस्था समाजले मिलाउने छ ।
ग) जी–बबले कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रममा भाग लिदाँ आमा–बुवाको सहमति लिनुपर्ने छ ।
यो त एक प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो, यस बाट बुझ्नु पर्ने कुरा अब हाम्रो समाज कता तिर गई रहेको छ ? किन यसरी विकृत बन्दै छ? एक पटक राम्रो संग सोच्नु पर्ने बेला भयो। २०४६ पछि को व्यवस्था परिवर्तन सँगै सामाजिक मूल्य मान्यता नी एका एक परिवर्तन हुन थाले, प्रजातन्त्र को नाम मा जसले जे नी गर्न पाउने उदार अर्थतन्त्र भित्रियो।लगाम लगाउन पर्ने निकाय, नीति निर्माण गर्ने निकाय सबै लाई कसरी पैसा कमाउने भन्ने तिर मात्र ध्यान गयो। फल स्वरूप नागरिक का आधारभूत कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य मा निजी लगानी बढ्न सुरु भयो मनोमानी रूपमा। जुन कुरा पञ्चायत कालमा सरकारकै अधीन मा रहन्थे ,सबैले एक समान शिक्षा लिन्थे चाहे धनी वर्ग होस् या गरीब पढ्ने एउटै सरकारी स्कूल हुन्थ्यो ९काठमाडौं मा भएका एकाध निजी स्कूल बाहेक०।समाजमा सदभाव बनेकै थ्यो त्यो बेला, आर्थिक खाडल भए नी धनीका साथी नी गरीब हुन्थे । अब अहिले यस्तो भै सक्यो , आफ्नो सामथ्र्य देखाउने माध्यम भनेकै कति महंगो स्कूल मा छोरा छोरी पढाएको छ, त्यसै बाट हैसियत को मूल्यांकन हुने समाजको निर्माण भयो।
स्कूल मा संस्कार सिकाउने भन्दा भौतिक सुविधा दिने र महंगो लिने होड नै चल्यो । फेरि अर्को कुरा विशेष गरी शहरी क्षेत्र मा बुबा आमा २ जना कमाउन तिर ध्यान दिने , छोरा छोरीलाई असल संस्कार दिन भन्दा नी महंगो स्कूल मा होस्टेल मा राख्ने र समाज मा रवाफ दिने मैले त छोरालाई फलानो स्कूल मा होस्टेल मा राखेर पढाएको छु, खर्च यति लाग्छ भनेर फुर्ती लगाउने अनि कमाउन स्वदेश मा नभए विदेश भने नी जाने परिपाटीको नी विकास भयो । आमाहरु नी महिला स्वतन्त्रता को नाम मा घरको चुलो चौको गर्न हुँदैन भन्दै रोजगारी गर्ने आफ्नो बाल बच्चा तिर ध्यान नदिने उचित संस्कार न सिकाउने , यसैको नतिजा सुदिप भण्डारी (जी बब) हो।
अब की युरोप को सिको गर्दा गर्दै सन्तान नै नजन्माउने नीति तिर जानु पर्छ नत्र नीति नै ल्याएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ सन्तान जन्माई सके पछि १८ वर्ष नपुग्दा सम्म आफू सँगै राखेर सामाजिक मूल्य मान्यता आचरण सिकाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकार ले अहिले को को शिक्षा प्रणाली लाई सके सम्म चाँडो परिमार्जन गरेर सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय बीचको खाडल पुर्ने व्यवस्था गर्न सकेन भने स्थिति अझ भयावह हुने निश्चित छ। पढाइ हुने पाठ्यक्रम नी एउटै हुनु पर्छ सबै विद्यालयमा र नैतिक शिक्षा अनिवार्य गरिनु पर्छ नेपालको पारिवारिक र सामाजिक ढाँचा अनुसारको।
अहिले सुदिप भण्डारी(जी बब) जस्तो छोरा कसैको नहोस् भनी रहेका छन् तर यसमा आमा बुबा नै दोषी छन् । जस्तो बीउ रोप्यो उस्तै फल फल्ने न हो आखिर। छोरालाई समय र संस्कार दिन सकेको भए आज आफ्नै छोरा संग लिखित सहमति गर्नु पर्ने दिन आउने थिएन।
2semicircle June 22, 2022	मा	8:06 pm
अघिल्लो लेखमासमयले के गर्छ र किन आवश्यक छ ?
अर्को लेखमाएसपिपि विवाद सतह मा आउनुको कारण चीनले भर्खर पारित गरेको सैनिक नीति